IMorocco iyayinqabela yonke inqwelomoya yase-UK, iJamani kunye ne-Netherlands ngenxa ye-COVID-19 spike entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziNqabileyo eMorocco » IMorocco iyayinqabela yonke inqwelomoya yase-UK, iJamani kunye ne-Netherlands ngenxa ye-COVID-19 spike entsha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-Morocco iyakwalela zonke iinqwelomoya zase-UK ngenxa ye-COVID-19 spike entsha eBritane.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-United Kingdom inike ingxelo yamatyala amatsha e-COVID-19 kunaseFrance, Germany, Italy naseSpain zidityanisiwe.
I-Morocco iyala ukuthintela iinqwelomoya ukuya nokubuya e-UK ngenxa yokonakala kwe-COVID-19 kwimeko eGreat Britain
Umphathi waseBritane i-EasyJet urhoxisile uhambo oluphumayo olusuka e-UK luye eMorocco kude kube ngu-30 kaNovemba.
Umsebenzi omkhulu weholide waseBritane i-TUI usebenza nabathengi ukulungiselela ukuhamba kwabo eMorocco.
Urhulumente waseMorocco ubhengeze ukuba zonke iindiza eziya nase-UK, eNetherlands naseJamani zinqunyanyisiwe phakathi ezinzulwini zobusuku ngoLwesithathu.
Amagosa aseburhulumenteni eRabat athi ukuthintelwa kweenqwelomoya e-UK kwenziwe ngenxa yenani elonyukayo lamatyala amatsha osuleleko lwe-COVID-19 e-Great Britain.
Eli nyathelo, eliza kuqala ukusebenza ukusuka nge-23: 59GMT ngoLwesithathu, liqinisekisiwe yiOfisi yeSizwe yeeNqwelo moya, eyalumkisa ukuba izakuhlala ikho 'kude kufike esinye isaziso.
Isigqibo sikarhulumente sokuthintela uhambo sinokuchaphazela iintsapho zaseNgilani naseWales zokucwangcisa ukuya kwindawo eyaziwayo yabakhenkethi ngexesha lamaholide ehafu, aqala kwiveki ezayo.
Umphathi waseBritane EasyJet, Eqhuba iinqwelomoya phakathi kweYurophu kunye Morokho, urhoxisile uhambo oluphumayo olusuka e-UK luye eMorocco kude kube ngu-30 kaNovemba.
EasyJet Uneengxoxo norhulumente waseMoroccan malunga nokuhambisa inqwelomoya ukubuyela kubemi base-UK abazifumana bevaleleke phesheya ngenxa yezithintelo.
Umsebenzi omkhulu weholide i-TUI iqinisekisile ukuba ithethile norhulumente waseMorocco malunga neli nyathelo, wathi inkampani isebenza nabathengi ukulungiselela ukuhamba kwabo kwisizwe esikuMntla Afrika.
Isigqibo sokuthintela uhambo phakathi kwe-UK kunye Morokho iza ngamagosa aseBritane arekhoda ngaphezulu kwe-40,000 yamatyala amatsha e-COVID-19 ngemini, kwaye ilizwe laxela ukusweleka okuphezulu ngosuku olunye ukusukela kwi-coronavirus ukusukela ngoMatshi.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-UK inike ingxelo yamatyala amatsha e-COVID-19 kunaseFrance, Germany, Italy naseSpain ngokudibeneyo.
Intloko yeqela lamaBritane i-NHS Confederation, u-Matthew Taylor, ulumkise ngelithi i-UK "iyakhubeka kwingxaki zasebusika," ishiya inkonzo yezempilo "isemaphethelweni."
Nangona kunjalo, urhulumente wase-UK uzikhabile iifowuni zokuphumeza izithintelo ze-COVID-19 phantsi kwe-COVID 'Isicwangciso B,' egweba nayiphi na ingcebiso yokutshixwa ebusika.